It is me. Ko Niknayman.: သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ ကြီး၏ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် သောတုဇနဘိက္ခု စာသင်သားရဟန်းများ၏ ကြေညာချက်။
(၁)။ အာဏာပိုင်များအနေနဲ့သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ ကြီးမှ တောင်းဆိုထားသော အချက်များအား ချွင်းချက်မရှိ လိုက်နာတောင်းပန်ရန် ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်သည်။
(၂)။ အာဏာပိုင်များက လိုက်နာမှုမရှိပါက နောင်တော်တပ်ပေါင်းစုကြီးမှပတ္တနိက္ကုဇ္ဖန ကံဆောင်မည်ဆိုပါက မြန်မာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိစာသင်သား သောတုဇန ဘိက္ခုများအနေဖြင့် နောင်တော်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းကံဆောင်ကြရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
(၃)။ အာဏာပိုင်များ လာဘ်ထိုးသည့် တံစိုးလက်ဆောင်များအား လက်ခံပြီး အောက်လက် သောတုဇန ဘိက္ခုများအား တင်းကြပ်သည့် ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်သည့် ကျောင်းတိုက်များအားလုံးအား ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်သည်။
(၄)။ အာဏာပိုင်များ ကပ်သည့် ဆွမ်းကို ပယ်ချပြီး ဆွမ်းခံမထွက်သည့် ကျောင်းတိုက် များအားလုံးအား သာ သနာ့ အာဇာနည်များ စံပျော်ရာ ကျောင်းတိုက်များအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်လိုက်သည်။
(၅)။ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ ကြီးမှ ကံဆောင်မည့်နေ့ ရက်ကို ကြေညာလိုက်သည် နှင့်တပြိုင်နက်၊ နယ်အသီး သီးရှိ စာသင်သား သောတုဇန ဘိက္ခုများအနေနှင့် တချိန်တည်းတွင် နီးရာသိမ်များတွင် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဖန ကံ ဆောင်ခြင်းအမှုကို ပြုကြရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
Posted by Ko Niknayman at 9:41 AM